Monday, May 28, 2007 Chitatu, July 4, 2007 Douglas Karr
Nhasi izuva reChirangaridzo muUnited States. Zuva reChirangaridzo izuva ratinozivisa avo vakabhadhara mutengo wekupedzisira kwatiri. Kukudza vakafa vedu hakusi kusimbisa kwehondo, asi, kuri kupa ruremekedzo kune avo vasina kuzombodzoka kushamwari uye mhuri.
Vanhu vazhinji vanovhiringidza Veterans Zuva neChirangaridzo Zuva… izvo zviviri zvakasiyana zvakanyanya. Veterans zuva rinokudza maVeterans vapenyu kana vakafa, vangangodaro vakarwa kana vasina kumbobvira vaita vachiri kushandira nyika yavo. Zuva reChirangaridzo nderevaya vakarwa vakafa.
Sekufamba kunoita nyaya, General Butterfield haana kufara nekufona kweKudzima Mwenje, achifunga kuti kufona kwacho kwaive kwakanyanyisa kuratidza kuti mazuva apera, uye nerubatsiro rwebrigade bugler, Oliver Willcox Norton (1839-1920), akanyora Taps kukudza varume vake vachiri mumusasa kuHarrison's Landing, Virginia, zvichitevera Hondo Yemazuva manomwe.
Hondo idzi dzakaitika panguva yePeninsular Campaign yemuna 1862. Kudana kutsva uku, kwakanzwika husiku ihwohwo muna Chikunguru, 1862, kwakakurumidza kupararira kune mamwe mauniti eUnited Army uye zvinonzi zvaishandiswawo neConfederates. Mapombi akaitwa ehurumende bugle kufona mushure mehondo.
Kubva kuTaps Bugler Webhusaiti.
[odhiyo: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2007/05/taps.mp3]
Kurova kwanga kusiri kwekutanga, yaive yakanyanya kunyorwa kubva kune yakafanana bugle kufona, inonzi Tattoo, iyo yakatambiswa awa rimwe chete mauto asati afanirwa kupedza zuva uye kurara. Vamwe vanhu zvakare havazive kuti mazwi akanyorwa kuna Taps, iyo yakanaka asi inoshungurudza bugle yekufona inoridzwa mukuremekedza hama nehanzvadzi dzedu dzakadonha:
Zuva rapera, zuva raenda,
Kubva kumakomo, kubva kugungwa,
Zvese zvakanaka, zorora zvakanaka,
Mwari vava pedyo.
Kunopera chiedza; Uye kure
Inoenda zuva, Uye nyeredzi
Fare you well; Zuva raenda,
Kutenda nekurumbidza, Kwemazuva edu,
Neath zuva, Neath nyeredzi,
Sezvatinoenda, Izvi tinozviziva,
Nhasi uno zvakare chiyeuchidzo chemakumi maviri nemashanu che Vietnam Veteran Chirangaridzo.
May 28, 2007 pa 11: 32 AM
Waona here kuti Google yakapa veterans shaft gore rino nekusapa yakanyorwa yeChirangaridzo Day logo? Vanokudza zvese kubva kuZuva rePasi kusvika kuZuva reRusununguko, asi nei Google isingafarire mavheti kudaro?
May 29, 2007 pa 11: 46 AM
Izvi zvinonakidza - handina kumbozviona. Ndinovimba kuti hachisi chinhu chakafanorongwa. Kanenge mureza weAmerica wakanaka wakasimwa mune humwe uswa ungave wakanaka. Ivo vanonzi vakaisa logo yeKurangarira zuva muCanada yaive nemaPoppies pairi, asi hapana apa.
Sezvineiwo, Al Gore ari pabhodhi ravo. Pamwe anogona kuratidza kutsigira kwake magamba edu akapunzika nekuita hurukuro navo.